October | 2007 | Layma's World | Page 2
Posted on October 21, 2007 by layma
လေးမ ရဲ့ပို့စ်တွေမှာ ရေးပေးသွားတဲ့ ကဗျာ ၂ ပုဒ်ကို ကြိုက်လွန်းလို့ တင်လိုက်ပါတယ်…။
“အရူးများမဖတ်ရ…” တွင် ရေးသွားသောကဗျာ…
နို့ဆီခွက် တစ်ခွက်ရယ် …
သူငယ်ချင်း ခွေးဝဲစားတစ်ကောင်ရယ် …
ရာသီဥတု မပါဘူး …
အားလုံးထက် တစ်မူးသာတယ် …”
လေးမက အရူးကို စကားပြေနဲ့ ရေးပြတယ်..။ ဂျယ်ရီက ကဗျာပြန်ရေးသွားတယ်…။ ပညာရေးဝန်ကြီးသိရင် “ဖော်ပြပါ စကားပြေကို ကဗျာစပ်ဆိုပါ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပုံစံ အသစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်…။
“နှုတ်မဆက်နဲ့ ငိုချင်တယ်” တွင် ကိုမျှားပြာ ရေးစပ်သွားသောကဗျာ…
မျောသာ လွင့်လိုက်ချင်တော့သည် …… ။ ”
ပိုင်ရှင်များသည်… ထွက်ပြေးနေသူနှင့် အိမ်ခြေမဲ့တစ်ဦးဖြစ်နေသောကြောင့် ခွင့်မတောင်း…ခေါင်းစဉ်မမေးတော့ပါ…။ မျက်စိလည်ပြီးရောက်လာလျှင် အလိုက်တသိ ခေါင်းစဉ်ပေးသွားနိုင်သည်…။ ။
Filed under: comment, Poem |	3 Comments »
Posted on October 18, 2007 by layma
( ရေးသူမသိသော story တစ်ပုဒ်ကို လေးမ နားလည်သလို ဘာသာပြန်သည်) ပြုံးလိုက်ပြီလား ။ ဒါဆို စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းပျော်သွားပြီ ။ ဒါကြောင့် စိတ်..စွပ် လို့ပြောတာ ။ ဘာရလိုက်သလဲ ။ သူများပြောတိုင်းမလုပ်ဘူး … ဘယ်သူ့ မှဂရုမစိုက်ဘူးကွ…ငါလုပ်ချင်တာ လုပ်မယ်ဆိုရင် တခါတရံ နစ်နာသွားလိမ့်မယ် ။ သူပြောသလို လုပ်စရာမလိုဘူး…ဒါပေမယ့် သူပြောတာကို နားထောင်ရမယ် … ( လိုက်နာတာနဲ့နားထောင်တာမတူပါ) နားပိတ်ထားလို့မရဘူး ။ သူဘာကြောင့် ဒီလိုပြောလဲ သုံးသပ်ကြည့်ရမယ် ။ ပြီးမှ ကိုယ်ကြိုက်သလို ဆက်လုပ် ။ လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်အတွက်ချည်းပဲ လုပ်နေကြတာ မဟုတ်သလို ဆရာကြီးလုပ်ချင်သူတွေ ချည်းပဲလည်း မဟုတ်ဘူး ။ အရာရာကို အပြစ်ပြောတတ်တဲ့ လူတွေပဲရှိတာ မဟုတ်ဘူး ။ အသိပညာ၊ အတွေ့အကြုံ နဲ့ယှဉ်တဲ့ အကြံပေးမှုတွေကို နားထောင်ကြည့်ရမယ်… ပြီးမှ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် သုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီး လုပ်သင့်တာကိုလုပ်မယ် ဆိုရင် မကောင်းဘူးလား…။ ။
Filed under: Thinkings from story |	9 Comments »
Posted on October 15, 2007 by layma
……………..တနေ့နေ့… တချိန်ချိန်မှာ.. ပြန်ဆုံနိုင်ဖို့.. မျှော်လင့်ရင်း…….
ကိုမျှားပြာက အားလုံးကို ခေတ္တ ခဏနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အချိန်တွေကို စီမံခန့်ခွဲနိူင်တဲ့ တစ်နေ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ် … တဲ့…
( အချို့သော သူများလဲ နှုတ်မဆက်ဘဲ ပုန်းကွယ်နေကြတယ်….)
သိုးလေးနဲ့ ကိုသန့်ရေ …မင်းတို့ Blog မှာ လေးမ လာရှာရင် ခြေရာလက်ရာလေးတွေ အမြဲ ရှိနေစေချင်လိုက်တာ …(sparrow ကတော့ တားမရတော့ဘူး )…။ ကိုမျှားပြာလဲ တရုတ်ကြီး(အချိန်) ကို ကောင်းကောင်း စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ တနေ့ မီးမီးကိုပိုက်ပြီး ကဗျာတွေနဲ့အတူ ပြန်လာနိုင်ပါစေရှင် …။ ။
Filed under: That's what I wanna say |	13 Comments »
အမှောင်ထဲက… ကချေသည် …
Posted on October 13, 2007 by layma
Posted on October 9, 2007 by layma
ကြွက်ရိုးသား … ကြွက်ငြိမ်းချမ်း … ကြွက်မြုံစိ … ကြွက်ငြိမ်ကုတ် … ကြွက်ငကြောက် … ကြွက်လူပျက် … ကြွက်ပျော်ရွှင် … ကြွက်ငကြွား …ကြွက်ဓါတ်ပုံဆရာ… ကြွက်အနုပညာ … ကြွက်ကဗျာ … ကြွက်ဂီတ … ကြွက်ပညာ … ကြွက်စာပေ ကလေးများလည်း … ရှိနေပါတယ် တဲ့ … ။ အဲဒီ ကြွက်ကလေးတွေ ကိုတော့ လေရှူခွင့် ပြုသင့် ပါတယ် လို့ …. ပြောပြချင်ပါတယ် တဲ့ … ။ အဲဒီ ကြွက်ကလေးတွေ ကိုတော့ မွန်းကြပ် ပိတ်လှောင် … ချောင်ပိတ် …. မထားသင့်ပါဘူး လို့ … အတွန့်တက် ချင်နေကြ ပါတယ် … ။ ဒါတွေကို ကြောင်ဖားကလေး တွေက … ကောင်းကောင်း … သိပါတယ် …။ ဒါပေမယ့် ဘယ်တုန်းကမှ … ကြောင်တွေကို မနိုင်ခဲ့တဲ့ ကြွက်က … ကာတွန်းကား ထဲမှာ ကြောင်ကို ဆော်ပလော်တီး နေတာကို … မြင်တွေ့နေရတဲ့ ကြောင်တွေဟာ … ကြွက်တွင်းကို ဖွင့်ပေးဖို့ … သတ္တိ မရှိ ကြဘူး … ။